Sexy Mma WM 164CM J Cup Head TPE Okenye Mmekọahụ Doll Charlotte
Save 41%$ 1,679.99$ 2,799.99
Urdolls na-enye gị akwa bebi na-enwe mmekọahụ nke ọkachamara mepụtara WM Doll. Ihe WM Doll TPE bu ihe eji eme ka gburugburu ebe obibi, nke na-adighi egbu egbu na nke na adighi emeru aru mmadu; tinyere usoro mmepụta ya dị elu na nke pụrụ iche, akpụkpọ anụ nke ụmụ bebi na -emepụta na-adị larịị ma dịkwa nro, juputara na mgbanwe, ma nwee mmetụta dị nro dịka ezigbo akpụkpọ anụ mmadụ. Anyị na-ekwe gị nkwa na ị ga-enweta otu nwa bebi dị ka foto a. Ọnọdụ mmekọahụ ọ bụla ga-ekwe omume. Zọ 4 nke ntụrụndụ: ikpu, ara, ọnụ, na ahụ ike iji nwee mmetụta nke mmekọrịta na ezigbo nwa agbọghọ. Anyị na-mere nke kasị mma ọgwụ na ahụ ike na ihe onwunwe, na mbụ na klas mma.
Mụ na enyi m nwoke biri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu awa, n’ihi ya, ọ na-esiri anyị ike ịna-ahụ ibe anyị mgbe mgbe. Otu ụbọchị, m gara ịhụ ọrụ ya. Ọ bụ ụbọchị ụka ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị onye batara. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ya nọ ebe ahụ. O duuru m gaa "ezumike". Anyị malitere ịmalite ịchọpụta ... mmetụta ... metụ ... mgbe ahụ ọ jụrụ m ma m chọrọ ile anya n'ike mmụọ nsọ ya. N'ebe ahụ, ọ dị nnukwu ma sie ike. Ka anyị na-aga ije ọsọ na ọsọ, m bidoro chụpụ ya nwayọ. Tupu mụ amara ihe na-emenụ, etinyefere m ọkpa ya n’ọnụ m. Mgbe obere oge ọ dị oke ọkụ, ọ kpughere pant m wee malite ibo cat m ebubo. Mgbe ọ tụrụ m aka na pusi, m tụpụrụ ya n'ahụ. Anyị gbakọtara. Ọ mara mma, na ọ dị oke ọkụ, n'ihi na mmadụ nwere ike banye n'ime anyị oge ọ bụla.
Elu ： 164cm J-iko
Ibu ibu ： 34kg
Bust ： 86cm
N'úkwù ： 61cm
N'úkwù ： 91cm
Ogwe aka: 61cm
Ogwe aka: 22cm
N'ime ogologo: 86cm
Apata okirikiri: 51cm